Shiinaha oo dumiyey 16,000 oo masaajid isla markaana Muslimiinta dalkaasi ku xabbisay 380 xero | Hadalsame Media
Home Wararka Shiinaha oo dumiyey 16,000 oo masaajid isla markaana Muslimiinta dalkaasi ku xabbisay...
Shiinaha oo dumiyey 16,000 oo masaajid isla markaana Muslimiinta dalkaasi ku xabbisay 380 xero
(Xinjiang) 25 Sebt 2020 – Dowladda Shiinaha ayaa burburisey kumannaan masaajid oo ku yaalla gobolka Xinjiang taasoo qayb ka ah xadgudubyo ku dhacaya Muslimiinta dalkaasi, sida ay ogaatey hay’ad Australian ah oo xigtan faafisay maanta oo Jicme ah.
Waxay sheegeen in ka badan 1 milyan oo qof oo ah dadka Uighurs iyo Muslimiin kale oo Turkic ah lagu xareeyey 380 xero oo ku yaalla woqooyi galbeed dalkaasi, kuwaasoo dadka lagu khasbayo inay ka tagaan diintooda iyo waxyaabaha ay waajibinayso.
Waxaa kale oo dadkan lagu khasbaa inay ku dhaqaaqaan wax kasta oo ay mamnuucayso diinta Islaamku, sida cabista khamriga, cunista khaansiirka iyo wax kasta oo la qaabad ah.
Qiyaastii 16,000 masjid ayaa la burburiyey ama la waxyeelleeyey, sida ay qabto hay’adda Australian Strategic Policy Institute (ASPI) oo warbixinteeda ku salaysay sawirro dayax-gacmeed iyo tirakoobyo.
Masaajidyada ugu badan oo lagu qiyaasayo 8,500 ayaa la burburiyey 3-dii sanadood ee ugu dambeeyey oo qura, iyadoo meelaha ugu badan ay yihiin magaalada Urumqi oo ah caasimadda Gobolka Xinjiang iyo Kashgar.
Dhanka kale, masaajid badan oo aan la wada burburin ayaa minaaraadkii ama qubooyinkii laga dumiyey ama qoraallo diimeed laga masaxay, waxaana haatan haray wax ka yar 15,500 oo masjid oo ku yaalla agagaarka Xinjiang, waana masaajiddii ugu yaraa ee gobolkaa kusoo hara tan iyo 1960-kii.
Dalalka Muslimka ayaan cadaadis ku filan saarin dalka Shiinaha, marka laga reebo cambaarayn af baarkii ah oo kasoo baxday dalalka qaar.
Previous articleWixii aan kusoo arkay maxkamadda shalay lagu qaaday kiiska isha lagu wada hayo ee XAMDI?!!
Next articleDadka Ceelwaaq oo DF ka codsaday in loosoo diro Ciidanka Haramcad kaddib dilal ay u gaysteen KDF (Dibedbax ay maanta dhigeen & dhacdo xanuun badan)